Football Khabar » युरोपियन गोल्डेन बुटमा लेवान्डोस्की दोब्बरले अघि : कसको कति गोल ?
युरोपियन गोल्डेन बुटमा लेवान्डोस्की दोब्बरले अघि : कसको कति गोल ?
जारी सिजन २०१९–२० मा युरोपियन गोल्डेन बुटमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका स्टार खेलाडी रोवर्ट लेवान्डोस्की अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा दोब्बरले अघि देखिएका छन् । लिगका ७ खेल सकिँदा पोलिस फरवार्डले कूल १४ गोल गरिसकेका छन् ।
बुन्डेसलिगामा हालसम्म ७ खेल सकिएका छन् । उनले मात्रै ७ खेलबाट १४ गोल गरेर गोल गर्ने मामिलामा उत्कृष्ट लय समातेका छन् । उनले औसतमा हरेक एक खेलमा २ गोल गरेका छन् । मैदानमा बिताएको समय हेर्दा उनले हरेक ५५ मिनेटमा १ गोल गरेका छन् ।
यस्तो छ सर्वाधिक गोलकर्ताको सूची :
रोवर्ट लेवान्डोस्की (बुन्डेसलिगा) – १४ गोल
सर्जियो अगुएरो (प्रिमियर लिग ) – ८ गोल
टमी अ्रबाहम (प्रिमियर लिग) – ८ गोल
सिरो इम्बोइल (सिरी ए) – ७ गोल
भिक्टोर ओसिमहेन (लिग वान) – ७ गोल
लोरेन मोरोन (ला लिगा) – ६ गोल
करिम बेन्जेमा (ला लिगा) – ६ गोल
जेरार्ड मोरेनो (ला लिगा) – ६ गोल
प्रकाशित मिति २१ आश्विन २०७६, मंगलवार १७:१८